ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် Starfish Myanmar မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော Starfish Application ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Starfish Application အား အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံသဘောတူထားသည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
အသက် (၁၈) နှစ် အထက်ရှိမည်သူမဆို Starfish Application တွင် Account Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည််။
Registration ပြုလုပ်ရာတွင် ပထမဦးစွာမိမိဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိအားလပ်ချိန်တွင် application ရှိ My profile တွင် အချက်အလက်များပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ အချက်အလက်များတောင်းခံရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွနိုပ်တို့ အနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ အကောင့် အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အကောင့်ပိတ်လိုသည့်အခါမျိုး တွင် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏ သုံးစွဲမှု အပေါ်မူတည်၍ ကျွနိုပ်တို့ဘက်မှ မေတ္တာ လက်ဆောင်များ ပြန်လည်ပေးအပ်သည့် အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အတွက် အချက်အလက်များ တောင်းယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအသုံးပြုသော ဖုန်းနံပါတ်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော (သို့) ဆက်သွယ်၍ရသော ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရပါမည်။
Starfish Application ကို Andriod ဖုန်းများဆိုလျှင် Playstore တွင်လည်းကောင်း ၊ IOS ဖုန်းများဆိုလျှင် App Store တို့တွင် အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
Starfish Application တွင် ထည့်ထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ မှန်ကန်တိကျပြီး ပြည့်စုံမှု့ရှိရပါမည်။
Registration ပြုလုပ်ရာတွင် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် Password or PIN (Personal Identification Number) ကိုသတ်မှတ်ခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း Password or PIN နံပါတ် အား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားမှသာ လူကြီးမင်း၏ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ လုံခြုံမှု ရှိပါမည်။ လူကြီးမင်း၏ Account အား အခြားသူတစ်ဦးဦး သုံးစွဲနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ကျွနိုပ်တို့ကိုချက်ချင်း အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Starfish Application ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Starfish Myanmar ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ Service များနှင့် ပတ်သတ်သောကြော်ငြာများ၊ လက်ကမ်းစာဆောင်များ ၊ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အကျိုးရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤယခုဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းချက်များအပြင် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်တွင် ပါရှိသော စည်းကမ်းချက်များကိုပါ ဝယ်ယူသူမှ ဖတ်ရှု့နားလည် သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီဘက်မှ မှတ်ယူပါသည်။
Account နှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Application ၏ User Account သည် User များ၏ ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ် ဖြင့် ဖွင့်ထားသော Account များ ဖြစ်သည့်အတွက် ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) Sim Card ပျောက်ဆုံးမှုများ ဖြစ်၍ ဖုန်းနံပါတ် လဲလှယ်မည်ဆိုပါ လူကြီးမင်းတို့၏ မှတ်တမ်းများ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန် Customer Service သို့ ဆက်သွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Customer Service မှ လူကြီးမင်း ၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုသည့် အချိန်တွင် လူကြီးမင်းဘက်မှ အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူကြီးမင်း Account ပြန်လည် ဖွင့်ပေးရန် အတည်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းမှ Account ဖျက်သိမ်းမိပါက မိမိ၏ ဝယ်ယူ / ရောင်းချ မှတ်တမ်းများ ပျောက်ဆုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ Account အား အခြားသူတစ်ဦးဦး သို့ လွှဲပြောင်းပေးခွင့်မရှိပါ။
Terminal Wholesale Service သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
1. Point ရရှိခြင်း (အမှတ်ရရှိခြင်း) နှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း
1.1 ဤ Application အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုများအတွက် Point (အမှတ်) ရရှိသည့်အခွင့်အရေးများရှိပါသည်။
1.2 ဤ Application အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုများအတွက် Lucky Draw Coupon များ ရရှိသည့် အခွင့်အရေးများရှိပါသည်။ (မှတ်ချက် - Order Approved ဖြစ်ပြီးသည့် Order များအား Cancel ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ/ ငွေမသွင်း၍ Cancel ဖြစ်သွားသည် ဖြစ်စေ နောက်တစ်ကြိမ် Order ပြန်တင်သည့် အချိန်တွင် ယခင် Cancel ပြုလုပ်ထားသည့် Order Amount ထက် ကျော်လွန်သည့် ငွေ Amount သာလျှင် Luckydraw Coupon ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
1.3 ဤ Application အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့်အခါ လူကြီးမင်း၏ ဝယ်ယူမှုအပေါ်တွင်မူတည်၍ App မှ လူကြီးမင်း ရရှိမည့် Point အား အလိုအလျောက် ရရှိပါမည်။
1.4 ဤ Application အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့်အခါ လူကြီးမင်း၏ ဝယ်ယူမှုအပေါ်တွင်မူတည်၍ App မှ လူကြီးမင်း ရရှိမည့် Lucky Draw Coupon များ အလိုအလျောက် ရရှိပါမည်။
1.5 ရရှိသည့် Point များဖြင့် Starfish Application ရှိ မည်သည့် ကုန်ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ ၎င်း Point များအသုံးပြု၍ ပြန်လည် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Point ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း ထပ်ဆောင်း Discount 10% ခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
1.6 ရရှိလာသည့် Coupon များသည် Starfish Application မှ သတ်မှတ်အတည်ပြုလိုက်သည့် နံပါတ်နှင့် ကိုက်ညီပါက Starfish App မှ ကြော်ငြာထားသည့် ဆုမဲကို ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
1.7 ဆုမဲနှင့်ပက်သက်၍ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း ၊အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လာလျှင်သော်လည်းကောင်း Starfish Myanmar Company Limited မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
1.8 ရရှိထားသော အမှတ်များအား Online Sales (or) Application သုံး၍ ဝယ်ယူငွေပေးချေသည့်အခါသာ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Point အမှတ်များအား ငွေသား ပြန်လည် မထုတ်ပေးပါ။
1.9 လူကြီးမင်း ရရှိထားသော Point များအား အခြားသူတစ်ဦးဦး သို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုပါက ID ဖြင့် ဖြစ်စေ QR code Scan ဖတ်၍ ဖြစ်စေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် လူကြီးမင်း၏ Account တွင် ရှိသည့် ပမာဏသာ လွှဲပြောင်းနိုင်မည်။
1.10 ရရှိလာသည့် Point များသည် ရရှိသည့် နေ့ မှ တစ်နှစ်အတွင်း သုံးစွဲရန် အကျုံးဝင်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လျှင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး သုံးစွဲခွင့် မရှိတော့ပါ။ မိမိ၏ Account မှ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် Point များအလိုအလျှောက် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။
2. ငွေပေးချေခြင်း ၊ ငွေပေးသွင်းရန် နောက်ကျခြင်း နှင့် ရက်လွန်ကြေး
2.1 လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူသည့် ကုန်ပစ္စည်း အမှာ အတွက် ငွေပေးသွင်းရန် Due Date & Time (နောက်ဆုံးပေးသွင်းရမည့် ရက် နှင့် အချိန်) အား ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာအသေးစိတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
2.2 Cash Down ဝယ်ယူသည့် (Prepay) Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးသွင်းမှု မရှိလျှင် အလိုအလျောက် Order Cancel ဖြစ်သွားပါမည်။
2.3 Cash Down (postpaid) နှင့် Credit ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးများကို Starfish Application မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း လက်ခံပေးချေရပါမည်။
2.4 ငွေပေးချေရန်သတ်မှတ်ရက်ထက် တစ်လ ကျော်သည့်ရက်အထိ ငွေပေးသွင်းခြင်းမရှိသေးလျှင် စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို Starfish Myanmar Company Limited မှ Notice စာပေးပို့ပြီး Notice စာလက်ခံရရှိသည့်ရက်မှ တစ်ပတ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရန် မလိုဘဲ ဝယ်ယူသူမှ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကို ရောင်းချ၍ ပေးဆပ်ရန် သဘောတူပါသည်။
2.5 ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း Orders များအား Pay By Point နဲ့ Pay With Deposit စသည့် Payment Method ဖြင့်သာ ဝယ်ယူ၍ ရပါမည်။
2.6 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထားတစ်ခုခုဖြင့် Starfish Application တွင် ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး Starfish Application ၏ တာဝန်ရှိသူမှ တင်ပြသည့် ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထား စစ်မှန်ကြောင်း (စစ်မှန်သည့်ငွေလက်ခံအထောက်အထား) အတည်ပြုပြီးမှ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။
2.7 ဘဏ်များသို့ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံအထောက်အထားဖြင့်လက်ခံထားသော်လည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Starfish Myanmar Company Limited ၏ Seller ၏ Bank Account တွင် ငွေလက်ခံရရှိခြင်းမရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) ၎င်းငွေအား ပြန်လည်နှုတ်ယူသွားလျှင် ဝယ်ယူသူ လူကြီးမင်းမှ စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို အပြည့်အဝပေးသွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိပါသည်။
2.8 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းခြင်းများမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စက်သုံးဆီဖိုးငွေပေးသွင်းခြင်းကို Starfish Application မှ လုံးဝ တာဝန်မယူကြောင်းကိုသိရှိပါသည်။
3. Deposit ငွေကြိုသွင်းခြင်း နှင့် ခံစားခွင့်
3.1 Starfish Application မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Deposit ကြိုသွင်းထားနိုင်သည်။
3.2 စက်သုံးဆီပေးသွင်းငွေသည် ဝယ်ယူသည့် တန်ဖိုးထက် ပို၍ ပေးသွင်းမိလျှင် လူကြီးမင်း၏ Deposit Account တွင် ထားရှိပေးထားပါမည်။
3.3 ကြိုသွင်းထားသည့် Deposit များ၏ လက်ကျန် Deposit ငွေအပေါ်တွင် Point များ နေ့စဉ်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်လည်ရရှိပါမည်။
4. လူကြီးမင်းများ၏ ဝယ်ယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ထုတ်ယူခြင်း မရှိပါက လက်ကျန်အရေအတွက်ပေါ်တွင် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း သိုလှောင်ခ ပေးဆောင်ရန် Starfish Application မှ သိုလှောင်ခ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း သိရှိပါသည်။
5. စက်သုံးဆီဝယ်ယူရန် Order တင်ပြီး Approve ဖြစ်ပြီးပါက Order Cancel မဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးသွင်းရန် အထူးဂရုစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ငွေပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်၍ Order Cancel ဖြစ်လျှင် Starfish App တွင်ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ-Point Discount ရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း ၊ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့် လီတာ အကန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများ အပါအဝင် အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်)
6. စက်သုံးဆီဝယ်ယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေအားပေးချေပြီးပါက ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း ၊ ဝယ်ယူထားသည့် Order အား Cancel လုပ်ခြင်းများကို လုံးဝခွင့်မပြုသည်ကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
Door to Door Service (Yangon Area) သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
2.3 Cash Down (postpaid) ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးများကို Starfish Application မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း လက်ခံပေးချေရပါမည်။ (မှတ်ချက်။ ။ စက်သုံးဆီ ပေးပို့လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် ငွေပေးချေပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးကို သက်သာခွင့်ပြုထားပါသည်။)
2.4 Cash Down (postpaid) ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များ၏ Order များကို (၃)ရက်အတွင်းငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်လျှင် Starfish Application မှ Auto Cancel ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်ကို သိရှိပါသည်။
2.5 Cash Down ဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် Order များကို (၃) ရက်အတွင်း စက်ရုံသို့ ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ဝယ်ယူသူမှ Cancel ပြုလုပ်ခွင့် တောင်းခံနိုင်သည်။
2.6 Cash Down ဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် Order များကို (၃) ရက်အတွင်း ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ဝယ်ယူသူမှ ၎င်း Order အား နောက် (၃)ရက် သက်တမ်းတိုးပြီး ပေးပို့ရန်တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
2.7 Credit ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးများကို Starfish Application မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း လက်ခံပေးချေရပါမည်။
2.8 ငွေပေးချေရန်သတ်မှတ်ရက်ထက် တစ်လ ကျော်သည့်ရက်အထိ ငွေပေးသွင်းခြင်းမရှိသေးလျှင် စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို Starfish Myanmar Company Limited မှ Notice စာပေးပို့ပြီး Notice စာလက်ခံရရှိသည့်ရက်မှ တစ်ပတ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရန် မလိုဘဲ ဝယ်ယူသူမှ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကို ရောင်းချ၍ ပေးဆပ်ရန် သဘောတူပါသည်။
2.9 ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း Orders များအား Pay By Point နဲ့ Pay With Deposit စသည့် Payment Method ဖြင့်သာ ဝယ်ယူ၍ ရပါမည်။
2.10 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထားတစ်ခုခုဖြင့် Starfish Application တွင် ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး Starfish Application ၏ တာဝန်ရှိသူမှ တင်ပြသည့် ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထား စစ်မှန်ကြောင်း (စစ်မှန်သည့်ငွေလက်ခံအထောက်အထား) အတည်ပြုပြီးမှ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။
2.11 Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များအပြင် စက်သုံးဆီပေးပို့သည့် / စက်သုံးဆီ ပေးပို့စဉ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်သို့သာလျှင် ငွေပေးချေခြင်းကို Starfish Application မှ တရားဝင်လက်ခံအတည်ပြုပါသည်။ စက်သုံးဆီပေးပို့သည့် / စက်သုံးဆီပေးပို့စဉ်တွင်သာ ၎င်းကိုယ်စားလှယ်မှ ငွေလက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအချိန်ကာလတွင် ငွေပေးချေခြင်းအား Starfish Myanmar Company Limited မှ လက်ခံအတည်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနားလည်ပါသည်။
2.12 ဘဏ်များသို့ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံအထောက်အထားဖြင့်လက်ခံထားသော်လည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Starfish Myanmar Company Limited ၏ Seller ၏ Bank Account တွင် ငွေလက်ခံရရှိခြင်းမရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) ၎င်းငွေအား ပြန်လည်နှုတ်ယူသွားလျှင် ဝယ်ယူသူ လူကြီးမင်းမှ စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို အပြည့်အဝပေးသွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိပါသည်။
2.13 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းခြင်းများမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စက်သုံးဆီဖိုးငွေပေးသွင်းခြင်းကို Starfish Application မှ လုံးဝ တာဝန်မယူကြောင်းကိုသိရှိပါသည်။
7. Credit ဝယ်ယူထားသည့် Order များသည် ဝယ်ယူပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း ငွေမသွင်းထားသည့်အခြေအနေတွင် ဆီမထုတ်ပါက Auto Cancel ဖြစ်သွားပါမည်။
8. ယခုဝယ်ယူသည့် စက်သုံးဆီအား မိမိစက်ရုံ/မိမိအလုပ်ရုံအတွက်သာ သုံးစွဲမည်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဦးဦးသို့ လွဲပြောင်းရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ပါကြောင်း ဝယ်ယူသူ ကျွန်တော်/ကျွန်မမှ တာဝန်ယူပါသည်။
Petrol Station Retail Sales Service သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
2.1 Cash Down ဝယ်ယူသည့် (Prepay) Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာအတွက် စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို မိမိဝယ်ယူသည့် စက်သုံးဆီဆိုင်၏ ငွေလက်ခံသည့် ဝန်ထမ်းထံတွင် ငွေပေးသွင်းပြီး မိမိ၏ Wallet Account သို့ စာရင်းသွင်းပေးရန် တောင်းဆိုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
2.2 မိမိ၏ Wallet Account သို့ မိမိပေးသွင်းငွေ ရရှိပြီးသည်နှင့် စက်သုံးဆီဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
2.3 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထားတစ်ခုခုဖြင့် Starfish Application တွင် ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး Starfish Application ၏ တာဝန်ရှိသူမှ တင်ပြသည့် ငွေလက်ခံရရှိသည့်အထောက်အထား စစ်မှန်ကြောင်း (စစ်မှန်သည့်ငွေလက်ခံအထောက်အထား) အတည်ပြုပြီးမှ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။
2.4 Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များအပြင် စက်သုံးဆီပေးပို့သည့် / စက်သုံးဆီ ပေးပို့စဉ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်သို့သာလျှင် ငွေပေးချေခြင်းကို Starfish Application မှ တရားဝင်လက်ခံအတည်ပြုပါသည်။
2.5 ဘဏ်များသို့ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ငွေလက်ခံအထောက်အထားဖြင့်လက်ခံထားသော်လည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Starfish Myanmar Company Limited ၏ Seller ၏ Bank Account တွင် ငွေလက်ခံရရှိခြင်းမရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) ၎င်းငွေအား ပြန်လည်နှုတ်ယူသွားလျှင် ဝယ်ယူသူ လူကြီးမင်းမှ စက်သုံးဆီဖိုးငွေကို အပြည့်အဝပေးသွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိပါသည်။
2.6 ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ Starfish Application မှ အတည်ပြုခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ်များ၊ ငွေခန်းများ၊ Agent များသို့ ငွေပေးသွင်းခြင်းများမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စက်သုံးဆီဖိုးငွေပေးသွင်းခြင်းကို Starfish Application မှ လုံးဝ တာဝန်မယူကြောင်းကိုသိရှိပါသည်။
4. စက်သုံးဆီ သိုလှောင်ခြင်းအတွက်စည်းကမ်း
4.1 လူကြီးမင်းများ၏ ဝယ်ယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူရန် ရက် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် သိုလှောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ လူကြီးမင်း၏ စက်သုံးဆီအားတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။
4.2 လူကြီးမင်းစက်သုံးဆီဝယ်ယူစဉ်တွင် ဝယ်ယူပြီးထုတ်ယူရမည့်ရက် သတ်မှတ်ထားလျှင် ၎င်းသတ်မှတ်ထားသည့်ရက် မကုန်ဆုံးမီ ဝယ်ယူထားသည့်စက်သုံးဆီများကိုအပြီး ထုတ်ယူပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ပြည့်မီသည့်အထိ စက်သုံးဆီထုတ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးလျှင် ၎င်းကျန်ရှိသည့် စက်သုံးဆီအပေါ်တွင် Starfish Myanmar Company Limited မှသတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားအတိုင်း သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
2. နီးစပ်ရာ အေးဂျင့် ဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍ ဖြစ်စေ မိမိ၏ Bank account ထဲမှ ရွေ့ပြောင်း၍ ဖြစ်စေ Account ထဲသို့ ငွေထည့်သွင်းနိုင်သည်။
1. သုံးစွဲသူ သည် မိမိ အကောင့်ထဲမှ ငွေ အား ထုတ်ယူလိုပါက နီးစပ်ရာ အေးဂျင့် ဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍ ဖြစ်စေ မိမိ၏ Bank account ထဲသို့ ရွေ့ပြောင်း၍ ဖြစ်စေ PAYMENT SERVICE Account ထဲ မှ ငွေအား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
1. အေးဂျင့် ဆိုသည်မှာ Starfish Myanmar တွင် အေးဂျင့် မှတ်ပုံတင် ပုံစံ ၌ ဖြည့်သွင်းပြီး အေးဂျင့် လျှောက်ထားသူများထဲမှ Starfish Myanmar ဘက်မှ အတည်ပြုပေးထားသော အေးဂျင့်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။
2. ဝန်ဆောင်မှုများ ဆိုသည် မှာ Starfish Myanmar မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဝန်‌ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။
1. Starfish Myanmar Application တွင် အေးဂျင့် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အထောက်အထားများအား ပူးတွဲပေးပို့၍ အေးဂျင့် ပြုလုပ်ရန် မှတ်ပုံတင်သွင်းနိုင်သည်။
2. သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူအား Starfish Myanmar မှ အတည်ပြုပေးလိုက်သည်နှင့် အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
1. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုစီအတွက် သုံးစွဲသူများထံ ကောက်ခံရမည့် နှုန်းထားများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကောက်ခံရမည်။
2. အေးဂျင့် သို့ ပေးချေရမည့် ကော်မရှင်ခများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုပြီးတိုင်း အေးဂျင့်၏ Account စာရင်းထဲ သို့ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်း ထည့်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
3. အေးဂျင့်ထံမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုစီအတွက် Starfish Myanmar မှ ရရန်ရှိသော အခကြေးငွေများအား အေးဂျင့်၏ Account စာရင်းထံမှ ခုနှိမ်၍ ရယူခွင့် ရှိသည်။
1. အေးဂျင့်သည် အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်
2. Starfish Myanmar မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်လိုက်နာရမည်။
3. ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စသဖြင့် Starfish Myanmar မှ တရားဝင် ခန့်အပ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာပါက အပြည့်အစုံ တင်ပြပေးရမည်
4. Starfish Myanmar ထံသို့ ပြန်လည် ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသော ငွေသားများ နှင့် သုံးစွဲသူထံမှ ကောက်ခံရရှိသော ငွေသားများကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန် နှင့် Starfish Myanmar မှ သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်။
5. Starfish Myanmar ထံသို့ ပြန်လည် ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသော ငွေသားများ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျောက်ဆုံခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရခြင်း ဖြစ်ပါက အေးဂျင့် မှ တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး Starfish Myanmar ထံသို့ ပေးချေရမည့် စာရင်းပမာဏအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်။
6. အေးဂျင့် Account ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ အား မပေါက်ကြားစေရန် သိမ်းဆည်းရမည်။
7. Starfish Myanmar တွင် ဆောင်ရွက်ထားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် စာရင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား လျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းခံလာပါက ပြသခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း မပြုရပါ။
အေးဂျင့်မှ ငွေသွင်းခြင်း နှင့် ငွေထုတ်ခြင်း
1. အေးဂျင့် သည် မိမိ၏ Agent Account သို့ ငွေသွင်းလိုပါက ငွေသားအား Starfish Myanmar ၏ သတ်မှတ်ထားသော Bank Account သို့ ငွေသွင်း၍ bankslip အား Cash in payslip တွင် upload ၍ သော်လည်းကောင်း ၊ အေးဂျင့်၏ ဘဏ် အကောင့် မှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်း၍ သော်လည်းကောင်း ငွေသွင်းနိုင်သည်။
2. အေးဂျင့် သည် မိမိ၏ Agent Account ထဲမှ ငွေပြန်ထုတ်လိုပါက Agent Account မှ Bank Account သို့ လွဲပြောင်း၍ ဖြစ်စေ နီးစပ်ရာ Agent Account သို့ သွား၍ ဖြစ်စေ ငွေထုတ်နိုင်ပါသည်။
1. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ပြီးမြောက် ပါက လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ (Notification Message) ရောက်ရှိလာမည်။
2. အေးဂျင့်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလျှင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ ထက်ပိုသော ပမာဏ အား ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရပါ။
3. အေးဂျင့် မှ မှားယွင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများသည် Agent တွင်သာ တာဝန်ရှိပြီး ဆုံးရှုံးမှုအတွက် Starfish Myanmar တွင် တာဝန်မရှိစေရ။
1. အေးဂျင့်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မသမာသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည်တို့ ရှိခဲ့လျှင် Starfish Myanmar ၏ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့် အေးဂျင့်အဖြစ်မှ တာဝန်ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။
2. အေးဂျင့် မှ မိမိ၏ ဆန္ဒဖြင့် အေးဂျင့်အဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုလျှင် Starfish Myanmar ထံသို ရက်ပေါင်း (၃၀) ကြိုတင် အကြောင်းကြားရမည်။
3. အေးဂျင့်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပါက Starfish Myanmar နှင့် အေးဂျင့် အကြားကျန်ရှိသည့် ပေးရန်ရရန် အားလုံးကို စားရင်းရှင်းလင်းခြင်း ပြီးဆုံးမှသာ ရပ်စဲနိုင်သည်။